တရုတ် Smudge Brush, က Round မိတ်ကပ် brush, ပန်းရောင်မိတ်ကပ် Brush ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:Smudge Brush,round မိတ်ကပ် Brush,ပန်းရောင်မိတ်ကပ် Brush,8Pcs Brush သတ်မှတ်မည်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > brush သတ်မှတ်မည် > 8pcs Brush သတ်မှတ်မည်
8pcs Brush သတ်မှတ်မည် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Smudge Brush, round မိတ်ကပ် Brush ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ပန်းရောင်မိတ်ကပ် Brush R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Professional ကအလှကုန်မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
8PCS မှင်ဒီဇိုင်းကိုပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်ဖောင်ဒေးရှင်းမိတ်ကပ်ဖြီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
8 PC များ Synthetic အလှကုန်မိတ်ကပ် Brush  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fashion 8 PCs မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကိုယ်ပိုင်များဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဒီဇိုင်းဖုံးကွယ်ဖြီးအကောင်းဆုံး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရောင်းရဆုံးသာလွန်အရည်အသွေးကိုအလှကုန်ဖြီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရောင် Synthetic ဆံပင်လိမ်လက်ကိုင်မိတ်ကပ် Brush  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တောက်ပ 8pcs ခရမ်းရောင်မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Professional က 8 PC များမျက်စိဖြီးထား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Professional ကအလှကုန်မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည် Powder + ဖုံးကွယ် + မျက်နှာမပျက် + မီးမောင်းထိုးပြ + ပြားပုံသဏ္ဍာန်ဖြီး + မျက်လုံးအရိပ် + မျက်ခုံးဖြီး + နှုတ်ခမ်းဖြီး FOR 8 သတ်မှတ်ပေးသည် Smudge Brush စတိုင် Professional ကအလှကုန်မိတ်ကပ် Brush...
8PCS မှင်ဒီဇိုင်းကိုပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်ဖောင်ဒေးရှင်းမိတ်ကပ်ဖြီး အဆိုပါလူမီနီယံ ferrule, 100% Eco-friendly Nano wire ကိုဆံပင်နှင့်အတူဤ 8piece မှင်မှင်ဒီဇိုင်းကိုသစ်သားလက်ကိုင်နှင့်အတူဒီဇိုင်းကိုပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်ဖောင်ဒေးရှင်းမိတ်ကပ်ဖြီး။...
အကွိမျမြားစှာမိတ်ကပ် Brush- နှုတ်ခမ်း Brush, angle မျက်ခုံး Brush, ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအဘို့အ Eyeshadow Brush ။ ပရီမီယံ Material- Brush အမှုန့်, မိတ်ကပ်ယူနီဖောင်းကပ်ရန်ပရီမီယံနိုင်လွန်ဖိုက်ဘာ, လြယ္ကူနဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြသည်။ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း-color...
set 1 အမှုန့်ဖြီး, 1 မျက်နှာဖြီး, 1 ပုံဖြီး,3မျက်စိအရိပ်ဖြီး, 1 နှုတ်ခမ်းဖြီးနဲ့ 1 မျက်ခုံးဖြီးပါဝင်သည် အရည်နှင့်အမှုန့်မိတ်ကပ်အဘို့အသင့်လျော်အဆင်းလှသောအစ်မ, ရောင်စုံ, ကြံ့ဦးချိုပုံစုတ်တံ;...
ကိုယ်ပိုင်များဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဒီဇိုင်းဖုံးကွယ်ဖြီးအကောင်းဆုံး ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုများဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကြေးမုံလူမီနီယံ ferrule, 100% Eco-friendly Nano wire...
ပန်းရောင်အထူကတ္တီပါအပျော့ဆံပင်နှင့်ပန်းရောင်လိမ်ပလပ်စတစ်လက်ကိုင်အပြည့်အဝမိန်းကလေးနှလုံးကိုယ်စားပြု ပန်းရောင်မိတ်ကပ်ဖြီးသင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာခံစားမှုပေးသည် ဒီအစုတ်ဟာအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောအချစ်ဦးကြည့်ဖန်တီး သင့်ရဲ့ပါးပြင်,...
အရောင် Synthetic ဆံပင်လိမ်လက်ကိုင်မိတ်ကပ် Brush
အဆိုပါမိတ်ကပ် brush ကိုပေါင်းစပ်သင်တစ်ဦးရောင်စုံဘဝပေးစေခြင်းငှါအဆင်းအရောင်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ နေ့တိုင်းမိတ်ကပ်တစ်ရောင်စုံနဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အသက်တာ၌ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပန်းရောင်လိမ်လက်ကိုင်၏ဒီဇိုင်းကိုပယ်ကျသွားမပါဘဲချော်,...
တောက်ပ 8pcs ခရမ်းရောင်မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်
1. မိတ်ကပ်ဖြီး၏ဤဆွဲဆောင်မှုအစုံအရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ဒြပ်ဆံပင်၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ 2. အဆိုပါဆံပင်ပျော့ချောမွေ့နှင့်အထူသည်။ ဒါဟာအခြေခံအုတ်မြစ်, ဖုံးကွယ်, မုန့်, မျက်နှာ, ချောင်အမှုန့်, eyeliner...
Professional က 8 PC များမျက်စိဖြီးထား
PEREMIUM ဒြပ် Brush: တစ်ခုချင်းစီကိုစုတ်တံလက်ဖြင့်စုဝေးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီထုပ်ပိုးခဲ့သည်။ ပရီမီယံဒြပ်ဖိုင်ဘာပစ္စည်းတစ်ခုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထိပေးခံစားရလုပ်, သင်တို့၏သဘာဝအလှပမှုကိုပြသပြီးအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော finish ကိုချန်ထားမည်...
တရုတ်နိုင်ငံ 8pcs Brush သတ်မှတ်မည် ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် 8pcs Brush သတ်မှတ်မည် အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ Smudge Brush,round မိတ်ကပ် Brush,ပန်းရောင်မိတ်ကပ် Brush,8Pcs Brush သတ်မှတ်မည်,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် 8pcs Brush သတ်မှတ်မည် ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ 8pcs Brush သတ်မှတ်မည် အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် Smudge Brush,round မိတ်ကပ် Brush,ပန်းရောင်မိတ်ကပ် Brush,8Pcs Brush သတ်မှတ်မည်,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ 8pcs Brush သတ်မှတ်မည် အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
Smudge Brush round မိတ်ကပ် Brush ပန်းရောင်မိတ်ကပ် Brush 8Pcs Brush သတ်မှတ်မည် Single Brush